Temple Cheki Cheki - Dhizaini magazini
Chitatu 29 Chikumi 2022
Cheki Cheki Kubva pane kukurumbira kuri kukura mukubheka kumba taigona kuona panoda chechimiro chechino chechimiro chechingwa, chaigona kuchengetwa zviri nyore mukabati kana dhiraivhi. Chiri nyore kuchenesa uye yekushambidza ndiro. Tembere iri nyore kuungana uye intuitive nekutsvedza mahwendefa pamusoro wepakati tapered spine. Disassembly yakangoita senge nyore nekungotsvedza ivo vobva vasiya. Zvese zvina zvinhu zvikuru zvinobatirwa pamwe neStacker. Iyo Stacker inobatsira kuchengetedza zvese zvinowanikwa pamwe chete kune akawanda angled compact kuchengetedza. Iwe unogona kushandisa akasiyana eplate dhizairo kune akasiyana nguva.
Zita rechirongwa : Temple, Vagadziri zita : Chris Woodward, Izita remutengi : CWD ltd .
Bakeware, tafura, zvinwiwa uye cookware dhizaini
Cloud of Luster Muchato Wedenga Chitatu 29 Chikumi
Sberbank Headquarters Atrium Chipiri 28 Chikumi
Winetime Seafood Kurongedza Muvhuro 27 Chikumi
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Chitatu 29 Chikumi
Dhizaina ngano yezuva Chipiri 28 Chikumi
Dhizaini yezuva Muvhuro 27 Chikumi
Mugadziri wezuva Svondo 26 Chikumi
Dhizaini timu yezuva Mugovera 25 Chikumi
Cheki Cheki Chris Woodward Temple